Fedora inotiratidza izvo vhezheni itsva ye logo yacho ichataridzika | Linux Vakapindwa muropa
Fedora anotiratidza izvo vhezheni itsva ye logo yacho ichataridzika
Kana isu tichitaura nezve graphical enharaunda, imwe yeanonyanya kushandiswa ndeye GNOME. Muchokwadi, ndiyo iyo inoshandiswa neshanduro huru yezvikamu zviviri zvakakurumbira, senge Ubuntu kana Fedora. Kune vazhinji vanofunga kuti, dai vaifanirwa kusarudza chimwe chinhu senge "iyo GNOME kugovera par kugona" ivo vangasarudza iyo yechipiri, uye gore rino ndinofunga havana kushaikwa kwechikonzero, nekuti Ubuntu v21.04 ichagara muGNOME 3.38 uye Fedora v34 ichachinjira kuGNOME 40.
Chero zvazvingaitika, ichi hachisi Ubuntu vs. Fedora kana chero chinhu chakadai. Ini ndaingoda kujekesa kuti Fedora inzira inozivikanwa yekushandisa munharaunda yeLinux, uye nekudaro izvo zvavanazvo kugadziriswazve uye yatove yakaratidza logo iyo yavanoshandisa mune ramangwana nhau dzinonakidza. Chakavanzika chakaziviswa paYouTube, mumusangano weinenge awa, asi logo inoonekwa munguva pfupi, ingangoita maminetsi maviri.
Fedora inorerutsa logo yako
Kana iwe ukatarisa zvakanyanya, iyo nyowani logo iri zvakangofanana zvakafanana nechekare. Chimiro chemashure icho chatingafananidze nekutora gitare, kuchengetedza madaro, munguva pfupi iri kutevera ichaperekedzwa nechiratidzo chisingaverengeke chataigona kuona pamberi, nemusiyano wekuti F haizove yakajeka. Naizvozvi ivo vanozowana kupfava uye kuti iyo logo nyowani inotaridzika zvakanaka mune zvese zvigadzirwa uye zviitiko umo chirongwa chinoshanda.
Kana zviri zvenguva yakatarwa, logo yacho yanga iri kuita nharo kweanopfuura makore maviri uye ichave ichiwanikwa pane Fedora 34 iyo ichauya mwedzi unouya ne, pakati pezvimwe zvinhu a aarch64 vhezheni nePlasma iyo inogona kushandiswa pamabhodhi senge Raspberry Pi. Asi kushandiswa kweiyo logo nyowani mukati meFedora ecosystem hakuzove nekukurumidza, asi zvishoma nezvishoma. Kune rimwe gore kana gore nehafu, iyo vhezheni nyowani haizovapo kwese kwese.
Iwe uri mushandisi weFedora uye unofarira shanduko here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Fedora anotiratidza izvo vhezheni itsva ye logo yacho ichataridzika
Handidi shanduko. Iyo yapfuura icon inowedzera avant-garde uye yakanaka. Uye zvakafanana fan Fedora, kwete semushandisi, sezvo ini ndagara ndichishandisa Windows.
Yemahara vhezheni yeLastPass ichave iine mashoma maficha. Dzimwe nzira
PinePhone Beta Edition ichave inowanikwa pre-odha mwedzi unouya, neManjaro uye Plasma Mobile